Raha te-ho tianao ianao dia tia. - Seneca - Quotes Pedia
Raha te-ho tianao ianao dia tia. - Seneca
Ny fitiavana no zava-dehibe indrindra amin'ny fiainantsika, miaraka amin'ny fahasambarana. Samy mifandray ireo zavatra roa ireo. Raha tsy afaka mitia olona ianao dia tsy afaka hahasambatra. Raha te hahatratra fahasambarana ianao dia mila manaparitaka fitiavana araka izay tratry ny anananao.
Fantatsika fa indraindray dia sarotra ny mitia olona noho ny toe-javatra. Na izany aza, raha afaka mitia olona ianao, dia mety hisy hahasitrana azy. Eny, tokony ho fantatrao fa ny fitiavana no mpanasitrana tsara indrindra eto an-tany miaraka am-pitiavana anao, ahafahanao mampifaly ny olona sy mahafa-po koa
Ambonin'izany, hahazo fahasambarana sy fahafaham-po ianao. Eny, iray amin'ireo zavatra irin'ny ankamaroantsika. Raha tsy misy fitiavana dia tsy misy fisiantsika ao amin'ny fiainantsika. Noho izany, isaky ny misy olona tia ny olona iray dia tsy tokony hiala lavitra amin'izany ianao.
Ny zavatra iray tsy maintsy tadidinao dia ny hoe raha te handray fitiavana amin'ny olona iray ianao dia tokony ho tia azy ireo koa. Raha tsy manome fitiavana ianao dia tsy afaka manantena fitiavana avy amin'ny olona iray. Zavatra tokony hifanakalozantsika hifanakalozana. Ka aza mitsahatra ny mitia olona iray.
Na izany aza, io no safidy tsara indrindra ho anao raha tsy manantena zavatra avy amin'ny fitiavana ianao. Ny fitiavana olona iray ary manantena fitiavana ho valiny dia tsy zavatra tokony hataonao. Raha tsy mahavita manome fitiavana anao ilay olona, ​​dia hanimba ny fonao izany. Saingy tsy mila manahy momba ny zava-drehetra ianao fa fitsipika amin'ny fiainana fa raha manome fitiavana olona ianao dia haverinao aminy.
Noho izany dia afaka hitanao fa ny fitiavana no zava-dehibe indrindra amin'ny fiainantsika. Andraikitry ny fiadanantsika, fahasambarana, ary fahafaham-po. Mba ho marina, ny fitiavana dia zavatra tokony hasarobidinao. Hanome anao ireo fahatsiarovana fa afaka mitahiry ny fiainanao manontolo ianao.
Teny mahafatifaty amin'ny fitiavana
Fanamarihana lalina momba ny fitiavana
Quotes Fitiavana malaza
Teny tsara momba ny fitiavana
Quotes fitiavana fitiavana
Fanentanam-panahy momba ny fitiavana
Quotes Ny Fitiavana sy Fifandraisana
Sarin-pitiavana amin'ny teny nindramina sy laza
Love Quotes Amin'ny Sary
Quotes Fitiavana Fifandraisana
Sary an'ny Fitiavana Fitiavana
Teny momba ny fiainana sy ny fitiavana
Teny fohy fitiavana
Teny fohy momba ny fitiavana
Quote Fitiavana mamy
Teny tena izy ary teny marina
Ny vatosoa dia tsy azo aorina sy tsy misy fikorontanana na ny olona tonga lafatra raha tsy misy fitsapana. - Lucius Annaeus Seneca
Ny vatosoa dia tsy azo aorina sy tsy misy fikorontanana na ny olona tsy lavorary raha tsy misy fitsapana. - Lucius Annaeus Seneca Mifandraika…